Tababare Gareth Southgate oo safka xulka qaranka England ka saaray laba xiddig… (Maxay tahay sababta?) – Gool FM
Tababare Gareth Southgate oo safka xulka qaranka England ka saaray laba xiddig… (Maxay tahay sababta?)
(England) 07 Seb 2020. Tababaraha xulka qaranka England ee Gareth Southgate ayaa xaqiijiyay inuu safkiisa ka saaray xiddigaha kala ah Phil Foden iyo Mason Greenwood.
Macallin Southgate ayaa xiddigahan ka reebay xiddigaha xulka Saddexda Libaax u ciyaari doono kulanka UEFA Nations League ee soo aaddan, waxaana arrintaasi u wacan inay labada xiddig jabiyeen shuruucda xakameynta faafitaanka COVID-19.
Xiddigahan ayaa laga soo bandhigay muuqaallo muujinaya iyagoo hablo usoo kaxeynaya hoteelka ay deggan yihiin xiddigaha qaranka England kaddib ciyaartii ay Iceland kaga soo adkaadeen 1-0 habeenkii Sabtida.
Tababaraha xulka Ingiriiska ayaa galabta saxaafadda la hadlay, waxaana uu u xaqiijiyay inuu safkiisa ka saaray Foden iyo Greenwood, kuwaasoo aanan qayb ka noqon doonin kulanka ay Talaadada nagu soo fool leh la ciyaarayaan xulka qaranka Denmark.
Labadan laacib ayaa markii ugu horreysay u saftay qaranka England kulankii Iceland, iyadoo safka hore lagu soo billaabay Foden, halka Greenwood uu isna baddel kusoo galay.
Da’yarka Manchester United weerarka kaga ciyaara ayaa door muhiim ah ka qaatay ole’olaha ay kooxdiisa ku kasbatay usoo bixitaanka tartanka UEFA Champions League sanad ciyaareedkan, xilli kubbad sameeyaha Manchester City uu labadii xilli ciyaareed ee ugu dambeeyay si wacan kaga dhex muuqday safka uu hoggaamiyo Tababare Pep Guardiola.
Donny van de Beek oo loo sheegay inuu ku saxnaa go'aankii uu isaga diiday inuu u dhaqaaqo Spain oo uu ugu biiray Manchester United